::ဓ မ္မ စ ကား နေ့ တိုင်း ကြားက၊ စိတ် ထား ဖွေး လက် သိ ဥာဏ် ထက် ၏::: May 2007
တတ်ရဲ့ သားနဲ့ မပြောတတ်တာ စကား
ရှိရဲ့ သားနဲ့ မရှာတတ်တာ တရား
သိရဲ့ သားနဲ့ မဆပ်ဖြစ်တာ ကျေးဇူး
Posted by ယူဆဂိ at Thursday, May 31, 20070comment
Labels: အခက်ကြီး ၃ ပါး
ပဌာန်း ဥဒ္ဒေသနှင့် နဒ္ဒေသတို့ကို သုံးသပ်ရွတ်ဖတ်ခြင်းအားဖြင့် မျက်မှောက် ချက်ချင်းအခါမလင့် အောက်ပါ ကောင်းကျိုးများ ရနိုင်ပေသည်။
(၁) ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် ဘေးအန္တရာယ်အသွယ်သွယ်တို့ကို လွန်မြောက်နိုင်ခြင်း။
(၂) ကျရောက်လတ္တံ သောဘေးအန္တရာယ်တို့မှ ကင်းလွတ်နိုင်ခြင်း။
(၃) အပြစ်ကင်း၍ ကောင်းကျိုးပွားသည့် ဆောင်ရွက်ချက် ကိစ္စအ၀၀တို့ကို ပြီးစီးအောင်မြင် စေနိုင်ခြင်း။
(၄) အပြစ်ရှိ၍ မကောင်းကျိုး ဖြစ်စေမည့် ကျူးလွန်ခြင်းတို့မှ ရှောင်လွှဲနိုင်ခြင်း။
(၅) အချုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သမျှ ကောင်းမြတ်သည့် ကိစ္စခပ်သိမ်းတို့ကို ပြီးငြိမ်းအောင်မြင်စေနိုင်ခြင်း။
(၆) အဆုံးစွန်သော ဘ၀၌ နိဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုရခြင်း စသည့် အကျိုးတရား....တို့ပင်တည်း။
”အတုမဲ့ တန်ခိုးတော် ထင်ပေါ်လာခြင်း”
မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟာ ပဌာန်း ဒေသနာတော်ကြီးကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်တော်မူသောအခါမှသာ ရှင်တော်မြတ် ဘုရား၏ ကိုယ်တော်မှ ရောင်ခြည်တော် ခြောက်သွယ်တို့သည် ထွက်ပေါ် ကွန့်မြူးလာကာ အနန္တစကြ၀ဋာသို့ ပျံ့နှံ့ထွန်းလင်းလွှမ်းမိုးလာတော့သည်။ ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏ ဥာဏ်တော် အနန္တကို ထင်ရှား ပေါ်လွင်စေသည့် အခမ်းအနားကြီးကို ကျင်းပဘိသကဲ့သို့ ဖြစ်တော့သည်။ ဥာဏ်တော် တန်ခိုးတော်တို့သည် အတုမဲ့ ပြိုင်ဘက်ကင်းသည့် အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ချေပြီဟု မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင် များပြားလှသည့် နတ်၊ ဗြဟာ အပေါင်းတို့သည် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြည်ညိုသဒါလွန်ကြူးစွာဖြင့် ခြေတော် ဦးခိုက် ပူဇော်လေသည်။
ပဌာန်း ဒေသနာတော်ကြီး ကိုသုံးသပ်မှသာ ဥာဏ်တော် အနန္တ၊ တန်ခိုးတော် အနန္တ ဖြစ်ကြောင်း ပေါ်လွင် လာပေသည်။
သို့ဖြစ်သောကြောင့် ”ကောင်းရာမြတ်နိုး ကောင်းအောင်ကြိုးပမ်း”နေသူများအတွက် ကောင်းကျိုးတွေ ဖြိုးဝေအောင် တန်ခိုးရှိန်စော် အာနုဘော်တို့ တိုးတက်စေသည့် ပဌာန်း ဒေသနာတော်ကြီး ကို နေ့ညမပြတ် ရွတ်ဖတ်ကြရပေမည်။ သို့မှသာ မိမိတို့ သန္တာန်၌ ကိန်းအောင်းနေသော ကာယအား ဥာဏအား အစွမ်း သုတ္တိတို့ပေါ်လွင်လာမည်။ ထွန်းတောက်မည်။ ထက်မြက်မည်။
ထို့ကြောင့် ဖြူစင်ကောင်းမွန်သည့် စေတနာရှင်တို့သည် မိမိတို့ မျှော်မှန်းထားသော ကောင်းမြတ်သည့် ကောင်းကျိုးဟူသမျှကို မုချအောင်မြင်ရရှိနိုင်ကြစေရန် ရည်သန်ကာ ပဌာန်း ဒေသနာတော်ကြီး ကောင်းကျိုိးကို တင်ပြလိုက်ရပေသည်။ အခါမလပ် ထက်ကြက်မကွာ ပြုနိုင်ကြပါစေသတည်း..........။
Posted by ယူဆဂိ at Wednesday, May 30, 20073comment
Labels: ပဌာန်း အကြောင်း
ဒီနေ့ အရေးကြီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့သီတင်းကိုစောင့်နေရလို့ပါ။
Posted by ယူဆဂိ at Wednesday, May 30, 20070comment
(ကြွေးကင်းလျက်သာ၊ လမ်းခွဲပါ၊ စိတ်မှာဝမ်းမနည်း)
Posted by ယူဆဂိ at Sunday, May 27, 20073comment
Labels: လမ်းခွဲတာ ၀မ်းနည်းစရာလား
ဘ၀ဆိုတာ အခွင့်အရေး ၁ကြိမ်တော့ပေးစမြဲလို့ ယုံကြည်ထားပါ။
အချိန်မတန်သေးခင်မှာ ဘာဖြစ်ချင်ချင် မဖြစ်ပါဘူး.
ကံ+ ဥာဏ်+ ၀ီရိယ ပေါင်းမှပါ။
ကံ မလိုက်သေးပေမယ့်.. ဥာဏ် နဲ့ ၀ီရိယ ကို မလျှော့ပါနဲ့။
Posted by ယူဆဂိ at Friday, May 25, 20070comment
ရေဟာကျိုက်ကျိုက် ဆူနေအောင် ပူနေပေမယ့် မီးခဲကိုတော့ ငြိမ်းစေနိုင်တယ်။
ရွှံညွှန်နဲ့ နောက်ကျိနေတဲ့ ရေဟာလည်း မစင်အညစ်အကြေးကိုတော့ ပြောင်စင်စေနိုင်တယ်။
သစ်သီးမှာ အပုပ်အနာရှိပေမယ့် ငတ်မွတ်ဆာလောင်နေသူကိုတော့ အဆာပြေပျောက်စေနိုင်တယ်။
Posted by ယူဆဂိ at Friday, May 25, 2007 1 comment
Posted by ယူဆဂိ at Wednesday, May 23, 20070comment
ကျမ ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါ..ဘုရားစာတွေကို ရွတ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် အနက်အဓိပါယ်ကို ထည့်ရွတ်တာ ရှားပါတယ်။
တနေ့ ကျသူငယ်ချင်းကပြောတယ်..အနက်အဓိပါယ်လေးလည်း ထည့်ရွတ်ပါဆိုပြီးတော့..မကြာခင်တင်မဲ့ post တွေကို သူပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ တကယ်တော့ မှန်ပါတယ်၊ အဓိပါယ်ကို မသိဘဲ ကြက်တူရွေးလို ရွတ်နေရင် ဘာမှ အဓိပါယ်မရှိပါဘူး။ အဓိပါယ်ကိုသိပြီးသားဖြစ်လို့. ပါဋိ လိုရွတ်ရင်းနဲ့ စိတ်ထဲကနေ အဓိပါယ်ကို ပွားများ နေတယ်ဆိုရင်တော့ တမျိုးပေါ့လေ။
ဒီဘလောက်လေးကို သွားကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ...
Posted by ယူဆဂိ at Tuesday, May 22, 20070comment
ကု သိုလ် ကံ၊ အ ကု သိုလ် ကံ သည်သာ၊
မိမိ နောက်သို့ (ကိုယ့် နောက် သို့) သာ လိုက် ပါ ၏ ။
" မ နေ ရ လို့၊ သေ ကြ သော အ ခါ
ကိုယ် နောက် ကို ကား၊ ဘာများ ပါ မှာ၊
ပ စ္စည်း စုစု၊ တစ်ခု မ ပါ..၊
ကိုယ် ပြု ထား၊ ကံ များ ကိုယ် နောက် ပါ၊ "
မိ မိ ၏ အ ရိပ် သည် မိ မိ ၏ နောက် သို့ လိုက် သ လို
မိ မိ ပြု လုပ် ပြော ဆို သော "ကံ" တို့ သည်
မိ မိ နောက် သို့ ဤဘ၀၌၎င်း၊ ထိုဘ၀၌၎င်း လိုက် ပါ ၏။
ကိုယ် ပြု ကိုယ် စံ ၊ ကု သိုလ် ခံ စား
ကိုယ် ပြု ကိုယ် ခံ ၊ အ ကု သိုလ် ခံ စား
Posted by ယူဆဂိ at Monday, May 21, 20070comment
အထီး ကျန် ရင် အ ကျည်း တန် တယ် တဲ့...။
အဲ ဒီ့  စ ကား လေး ကို အ ရှင် ဆန္ဒ ဓိ က က ပြော ခဲ့ တာ ပါ ရှင်..။
ဒီနေ့မနက် ၇:၂၀ မှာ ထုံးစံအတိုင်း ferry(office bus) လာကြိုပါတယ်။ ၀န်းထမ်းအသစ်တွေ ထပ်ရောက်လာတဲ့အတွက် ကားမှာ လူတော်တော်များများပြည့်နေပါပြီ။
ထိုင်နေကျနေရာလေး ဘုံုံပျောက်သွားတာပေါ့လေ။ ဒါနဲ့ ရတဲ့နေရာမှာဘဲထိုင်လိုက်ပါတယ်။ မကြာခင်ကားပေါ်တက်လာတဲ့ သူတစ်ယောက်လက်ထဲ က ”အလင်းတန်းဂျာနယ်”လေးကို ဖတ်မယ်နော် လို့ပြောပြောဆိုဆို နဲ့ ယူဖတ်လိုက်ပါတယ်။
စာမျက်နှာတွေ တစ်ရွက်ပြီး တစ်ရွက် ဖတ်လာလိုက်တာ တခုသောခေါင်းစဉ်ဖတ်လိုက်ရတဲ့အခါ...
ဖတ်နေရင်း ...ဖတ်နေရင်း နဲ့ ရင်ထဲမှာ ဆို့ပြီးတတ်လာပါတယ်....
ဒါပေမယ့် ကိုယ်သိချင်နေတာလေးကို ဖတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်..
ငါရုံးရောက်တာ နဲ့ google မယ်ဆိုပြီး... ရုံးရောက်တာနဲ့ ချက်ချင်းရှာပုံတော်ဖွင့်ပါတယ်။
ဒီမှာပါ.. တွေ့သွားပါပြီ..။ http://www.vccmyanmar.org/
(၀ိတိုရိယ ကလေးများပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး ပရဟိတဂေဟာ)
သိပြီးသားလည်းဖြစ်ချင် ဖြစ်မှာပါ။ မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် နဲ့ သိပြီး မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်နေသူများအတွက် အသုံးများဝင်မလားလို့ပါ။
စာကြွင်း။ ။နောက်ထပ် နောက်ထပ် သင်သိသော ပရဟိတဂေဟာ..တွေများရှိကြရင်...comment လေးမှာဝင်ရေးပေးခဲ့ကြပါရှင်။
Posted by ယူဆဂိ at Sunday, May 20, 20070comment
Labels: Good Morning...
ဘယ်သူ့ကိုမှ ၊ ဘယ်အရာကိုမှ မချစ်လိုက်ပါနဲ့။
ဘယ်သူ့ကိုမှ ၊ ဘယ်အရာကိုမှ မမုန်းလိုက်ပါနဲ့။
Labels: မချစ်တတ် မမုန်းတတ်တဲ့သူ
ကုရုမင်းကြီး ရဲ့  မိဘုရားကြီး ငါးပါးသီလကို အလေးအနက်အထွတ်အမြတ်ထားကျင့်သုံးပုံကလည်း ကြည်ညိုလေးစားစရာ အတုယူအားကျစရာ ကောင်းလှပါတယ်။
တစ်နေ့တော့ ကုရုမင်းကြီး နဲ့ အိမ်ရှေ့ မင်းသားတို့ ဆင်စီးပြီး တိုင်းခန်းလှည့်လည် ကြပါတယ်။ ဆင်တစ်စီးထဲမှာ မင်းကြီးက ရှေ့ ကထိုင် ၊ အိမ်ရှေ့ မင်းသားကနောက်ကထိုင်ပြီး မြို့ ကိုလကျာ်ရစ်လှည့်လည် ကြည့်ရှုကြပါတယ်။
မိဖုရားကြီး ကလည်း ခြင်္သေ့ခံတဲ့ လေသာပြတင်းနားကနေ ရပ်ပြီး မောင်တော်မင်းမြတ် တိုင်းခန်းလှည့်လည်တာကို ရှုစားငေးမောနေပါတယ်.။အဲ့ဒီနေ့ကျမှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မိဖုရားကြီးရဲ့ မျက်စိထဲ အိမ်ရှေ့ မင်းသားဟာ ခါတိုင်းထက် ပိုချော၊ ပိုလှ ၊ ပိုကျက်သရေရှိနေပါတယ်။၀တ်စားတန်ဆာတွေကလည်း ခါတိုင်းနေ့တွေထက် ပိုပြီးတောက်ပြောင်နေတာကိုး။(အထူးနေ့ဆိုတော့ အထူးဝတ်စားဆင်ယင်ရတာပေါ့။)
ဆင်ပေါ်မှာ ရှင်ဘုရင်နဲ့အတူ တွဲထိုင်နေတဲ့ အိမ်ရှေ့ မင်းသား ရဲ့  အထူးချောမောခန့်ညားမှုကို မြင်တွေ့ရတဲ့ အခါ မိဖုရားကြီး စိတ်ထဲ တစ်မျိုးဖြစ်လာပါတယ်။
”သူ့ကိုသာ ငါတရင်းတနှီး ပေါင်းထားရင် သူ့အစ်ကို နတ်ရွာစံတဲ့ပြီး သူရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အခါ ငါ့ကိုမိဖုရားမြှောက်မှာ သေချာတယ်။ သူနဲ့သာ ဆိုရင်...”လို့မိဖုရားကြီးစိတ်ကူးယဉ်နေပါတယ်။
”ဘုရားရေ..ငါဘာတွေတွေးနေတာလဲ၊ ငါ့မှာ လင်ယောကျာ်းငုတ်တုတ်ရှိရက်သားနဲ့  တခြားယောက်ျားတစ်ယောက်အပေါ် သာယာနှစ်သက်မိတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားရတယ်လို့.. ငါတော့
ကာမေသုမိစာ ရကံထိုက်ပြီထင်ပါရဲ့ ”
မိဖုရားကြီးဟာ အိမ်ရှေ့ မင်းသားကို ရွှေလက်တွဲလိုစိတ်နဲ့ သာယာတပ်မက်စွာ ငေးမောကြည့်ရှုမိတာကို အကြောင်းပြုပြီး သူ့ရဲ့ ငါးပါးသီလအပေါ်ကို စိတ်မသန့်ပဲ သံသယဖြစ်နေပါတယ်။
တကယ်တော့ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်မဟုတ်သူကို စိတ်ထဲက သာယာတပ်မက်မိသွားတာပဲ၊ ကိုယ်ထိလက်ရောက် လွန်ကျူးဖောက်ပြားတာမှမဟုတ်တာ၊ဘာအပြစ်မှမသင့်ပါဘူး။
ပြောပြစရာအပြစ်ဆိုလို့ အပြစ်မဟုတ်တဲ့ ဒါလေးပဲရှိတဲ့ မိဖုရားကြီး ရဲ့ ငါးပါးသီလ ကိုမှ ဂရုဓမ္မ လို့ မပြောရင် ဘယ်သူ့ ငါးပါးသီလ ကို ဂရုဓမ္မ လို့ ပြောဦးမှာလဲ။
မှတ်ချက်။ ။ အနီးစပ်ဆုံးဥပမာ ဆိုရင် -ပုထုဇဉ်လူသားတိုင်း.. ရုပ်ရှင်မင်းသား၊မင်းသမီးတွေကို နှစ်သက်သဘောကျကြတာဘဲလေ။ ကာမေသုမိစာ ရကံ မထိုက်ပါဘူး။ ကိုယ့်စိတ်မှာ ကိုယ့်သီလကိုသံသယဖြစ်ခဲ့ကြရင်...ဒီပုံပြင်လေးကိုဖတ်ပြီး- စိတ်သက်သာရာ ရနိုင်ကြပါစေ။
ကုရုမင်းကြီး ငါးပါးသီလကို အလေးအနက် အထွတ်အမြတ်ထားပြီး ဂရုတစိုက် ကျင့်သုံးပုံကလည်း ကြည်ညိုလေးစားစရာ အတုယူအားကျစရာ ကောင်းလှပါတယ်။
အဲ့ဒီခေတ်ကတိုင်းပြည်တွေမှာ သုံးနှစ်တစ်ကြိမ်တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ရောက်တိုင်း နက်ခတ်ပွဲသဘင်တွေ အကြီးအကျယ်ကျင်းပကြပါတယ်။ အဲ့ဒီနတ်ခတ်ပွဲသဘင်မှာ ရှင်ဘု၇င်တွေက နတ်သားအသွင်ဝတ်စားဆင်ယင်ပြီး ပန်းမျိုးစုံတန်ဆာဆင်ထားတဲ့ မြှားအထူးအဆန်းတွေနဲ့ အရပ်လေးမျက်နှာကို ပစ်လွတ်ကြပါတယ်။ မြှားပစ်တမ်းကစားကြတယ်ဆိုပါတော့....
တစ်ခုသောနှစ်ရဲ့  တစ်ခုသော နတ်ခတ်ပွဲမှာ ကုရုမင်းကြီးလည်း မြှားပစ်တမ်းကစားပါတယ်။ အရပ်မျက်နှာ သုံးခုကို ပစ်လိုက်တဲ့မြှားသုံးစင်းရဲ့ ကျသွားတဲ့နေရာကိုမြင်တွေ့ရပေမယ့် အရပ်မျက်နှာတစ်ခုကိုပစ်လိုက်တဲ့
မြှားတစ်စင်းရဲ့  ကျသွားတဲ့နေရာကိုတော့ မမြင်တွေ့ရပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲ့ဒီမြှားတစ်စင်းက
”အို... ဒု က္ခ ပါဘဲ။ မြှားတစ်စင်း ရေထဲ ကျသွားပြီး အဲ့ဒီမြှား ငါးကလေးတွေ ရဲ့ ကိုယ်ပေါ်ကျသွားရင်တော့ ငါးကလေးတွေ သေကုန်တော့မှာပဲ၊ ငါပစ်လိုက်တဲ့မြှားကြောင့်ငါးကလေး တွေသေသွားရင် ငါတော့...
့ပါဏာတိပါတကံ ထိုက်ပြီထင်ပါရဲ့ ”
ကုရုမင်းကြီး ဟာသူပစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ မြှားမတော်တဆရေထဲကျသွားတာကို အကြောင်းပြုပြီး သူ့ရဲ့ ငါးပါးသီလ အပေါ် စိတ်မသန့် ဘဲ သံသယဖြစ်နေပါတယ်။
တကယ်တော့သေစေလိုတဲ့ စိတ် မပါတဲ့အတွက် ငါးကလေးတွေ သေခဲ့ရင်တောင် ပါဏာတိပါတကံ မထိုက်ပါဘူး။ တဲ့...
ပြောပြစရာအပြစ်ဆိုလို့ အပြစ်မဟုတ်တဲ့ ဒါလေးပဲရှိတဲ့ ကုရုမင်းကြီး ရဲ့ ငါးပါးသီလ ကိုမှ ဂရုဓမ္မ လို့ မပြောရင် ဘယ်သူ့ ငါးပါးသီလ ကို ဂရုဓမ္မ လို့ ပြောဦးမှာလဲ။
စာကြွင်း။ ။ ယူဆဂိ..၉တန်းတုန်းကပေါ့... ကျူရှင် သင်နေတုန်း -စာအုပ်ဘီဒို တံခါးကို
အမှတ်တမဲ့ ပိတ်လိုက်တာ.. အိမ်မြောင်လေးတစ်ကောင် ၂ပိုင်းပြတ်ပြီး
မျက်စိရှေ့မှာတင်သေသွားတာကို မြင်လိုက်ရတော့.. အကြီးအကျယ်ငိုဖူးပါတယ်။
အဲ့ဒီနေ့က Physic ကျူရှင်ဆရာမ တော်တော်ချော့ယူခဲ့ရပါတယ်။ သတိရသွားလို့ပါ။
(ကုရုမင်းကြီး လို ဘဲ စိတ်ထဲမှာ ကသိကအောက်ဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်လေးတွေရှိရင် စိတ်ဖြေသိမ့်နိုင်ကြပါစေ။)
Posted by ယူဆဂိ at Saturday, May 19, 20070comment
အလေ့အထက်ို သီလလို့ခေါ်တာပါ။ အဲ့ဒီအလေ့ကို ခေါင်းပေါ်က ဆံပင်လို ရာသက်ပန်အလေးအမြတ်ထားသင့်လို့ ဂရုဓမ္မ ၊ ခါးဝတ်လုံချည်လို ထာဝရမြဲမြံသင့်လို့ နိစ္စ၊ အားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ ဂရုဓမ္မနိစ္စသီလ။
ဒါကြောင့် ငါးပါးသီလ ကို ဂရုဓမ္မနိစ္စသီလ လို့ခေါ်ပါတယ်။
တော်သလင်းလပြည့်နေ့ကိုတော့ ဂရုဓမ္မနိစ္စသီလအခါတော်နေ့လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဂရုဓမ္မအခါတော်နေ့ကို တနည်းအားဖြင့် ကုရုဓမ္မအခါတော်နေ့လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။
ကုရုဆိုတာ ကုရုတိုင်းသားတွေ ၊ ဓမ္မ ဆိုတာကျင့်သုံးတဲ့တရား။ ကုရုဓမ္မဆိုတော့ ကုရုတိုင်းသားတွေကျင့်သုံးတဲ့တရား။
ငါးပါးသီလကို ကုရုတိုင်းသားတွေ တလေးတစား ကျင့်သုံးတဲ့ တရားဖြစ်လို့ ကုရုဓမ္မလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကုရုတိုင်းသားတွေရဲ့ တရားဆိုပါတော့။
(ဘယ်က ကုရုတိုင်းလဲဆိုရင်တော့ ဟိုးဇာတ်တော်ထဲမှာပါတဲ့ တစ်ချိန်တုန်းက ကုရုတိုင်းပါ- အကျဉ်းချုပ်ပြောရရင်တော့ မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော် ကုရုတိုင်းမှာ ထီးနန်းအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ခဲ့စဉ်က မင်းကျင့်တရားဆယ်ပါး နဲ့အညီ အုပ်ချုပ်တဲ့အပြင် -ငါးပါးသီလကိုအထူးစင်ကြယ်အောင်
သမာဓိရဲ့ အကျိုးတရားတွေ အများကြီးရှိတဲ့အထဲက ဘုရားအလောင်းတော် နှလုံးသွင်းတဲ့ဂါထာထဲမှာပါတဲ့ အကျိုးတရားက အင်မတန် နှစ်သက်စရာကောင်းပါတယ်။
န ပရံ နာပိ အတ္တာနံ၊ ၀ိဟိံသတိ သမာဟိတော
သမာဓိ ရှိတဲ့ သူဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း မညှဉ်းဆဲပါဘူး။
သူတပါးကိုလည်းမ ညှဉ်းဆဲပါဘူး။ တဲ့...
လောကမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်နေတယ် ဆိုတာ သမာဓိ မရှိလို့ပါဘဲ။ သမာဓိမရှိတဲ့သူတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ဆင်းရဲအောင် အမြဲလုပ်နေပါတယ်။ ဆိုလိုတာက.. သမာဓိမရှိတဲ့သူတွေဟာ အမြဲတမ်း စိတ်ညစ်နေတတ်တယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။
(ဒါဆိုရင်- သမာဓိမရှိသူများထဲမှာ -ယူဆဂိက ထိပ်ဆုံးကပါ :P )
လူတွေစိတ်ညစ်တယ်. စိတ်ညစ်တယ် ဆိုတာ သမာဓိမရှိလို့ပါ။သမာဓိမရှိတော့ စိတ်ညစ်စရာအကြောင်းတွေပဲ တွေးနေမိတော့တာကိုး။ သမာဓိမရှိတဲ့ သူရဲ့ စိတ်ထဲကို အတွေးတွေ အမြဲတမ်းဝင်နေတယ်။ ၀င်တော့လည်း ကောင်းတဲ့အတွေးတွေ ၀င်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။မကောင်းတဲ့ အတွေးတွေ ၀င်တာကများတယ်။ အတွေးများတဲ့သူဟာ အများအားဖြင့် အဆိုးတွေကိုပဲ တွေးနေမိတတ်ကြပါတယ်။
ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ထားရုံနဲ့ မပြီးဘူး။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောသေးတယ်။ အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က ကိုယ့်ရဲ့ အပူတွေကူးစက်။
(KL နင်တော့ဒါဖတ်ပြီး ငါ့ကို ရီချင်မှာဘဲ.။ မှတ်ချက်...ကျမ သူငယ်ချင်းကကျမရဲ့ အပူသောကတွေကိုနားဆင်နေကျလေ)
အဲ့ဒီလိုအားဖြင့် သမာဓိမရှိတဲ့သူဟာ ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ချမ်းသာအောင် မနေတတ်ဘူး။ အမြဲစိတ်ညစ်နေတယ်။ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် ကိုယ့်နီးစပ်ရာကိုလည်းပဲ စိတ်မချမ်းသာအောင် စိတ်ညစ်အောင် လုပ်တတ်ပါတယ်။
ကဲအားလုံးဘဲ.. မနေ့ကစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ဆရာတော်ရဲ့  ”လောက၌အကောင်းဆုံးသောအရာ” ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးမှာ ဒါလေးကိုဖတ်မိပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း
သြော် ငါသမာဓိမရှိတဲ့သူပါလား လို့ တွေးမိပြီးရှက်ရပါတယ်။ ဒီနေ့ကစပြီး သမာဓိ ရှိဖို့ကြိုးစားတော့မယ်။
Posted by ယူဆဂိ at Friday, May 18, 20073comment
Posted by ယူဆဂိ at Friday, May 18, 20070comment
(မှတ်ချက်။ ။ကျမ ဘုရားရှိခိုးတိုင်း ပို့သနေကျမေတ္တာပို့လေးပါ။)
Posted by ယူဆဂိ at Thursday, May 17, 2007 1 comment
Labels: Wish for all
Posted by ယူဆဂိ at Thursday, May 17, 20070comment
ငါ့ဘ၀မှာ အမြင့်ဆုံးကံဆိုးခြင်း တွေသာဖြစ်ပါစေ။
Posted by ယူဆဂိ at Wednesday, May 16, 20070comment
ဒီ post တွေကိုတင်ထားတာ ဘယ်သူ့ကိုမှဆရာလုပ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး လို့ပြောချင်ပါတယ်။
ဘုန်းဘုန်း အရှင်ဆန္ဒာဓိက ရဲ့ စာအုပ်တွေထဲက အချို့ စာလေးတွေကို၊ ဖတ်စေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ လက်အညောင်းခံရိုက်ပြီး တင်ထားပေးတာပါ။
Posted by ယူဆဂိ at Monday, May 14, 2007 1 comment
Labels: Just intend to..
Posted by ယူဆဂိ at Monday, May 14, 20070comment
ဒီစာကိုမဖတ်သေးခင် နဲ့ ဖတ်ပြီးတဲ့နောက် အသိတရားနည်းနည်းဝင်သွားလို့ မျှဝေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ဒီ post လေးကိုတင်လိုက်တာပါ။
- မြတ်စွာဘုရားရှင်က ”မသေခင်သုတ္တန်” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ ”ပုရာ ဘေဒသုတ္တန်” မှာမသေခင်ဖြည့်ဆည်းရမယ့်
ဘ၀အရည်အသွေးတွေကို တစ်စုတစ်ဝေးတည်း ဟောကြားထားပါတယ်.။
မြင့်မြတ်တဲ့ လူသားတိုင်း နဲ့ မြင့်မြတ်လိုတဲ့လူသားတိုင်း မဖြည့်မဖြစ် ဖြည့်ဆည်းရမယ့် စိတ်ဓာတ်အရည်အသွေး၊ ဘ၀အရည်အသွေးတွေဖြစ်လို့ အကျဉ်းဆုံးချုပ်ပြီး ပြောပြချင်ပါတယ်။
ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ အတိတ်အကြောင်း ၊ ဖြစ်မလာသေးတဲ့ အနာဂတ်အကြောင်းတွေကို မလိုအပ်ဘဲ တွေးတောနေပြီး စိတ်ပင်ပန်းမနေသင့်ပါဘူး။
မသေခင်ကိုယ်တကယ်ပိုင်တဲ့ ပစ္စုပ္ပန်တစ်ခဏလေးမှာပဲ စိတ်ကို တည့်တည့်ချထားပြီး လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ရပါမယ်။
မသေခင်မှာ ကိုယ့်စိတ်ကို ဒေါသမီးမလောင် မြိုက်အောင် တိမ်းရှောင်နိုင်ရပါမယ်။
ထစ်ခနဲရှိ ဒေါသထွက်တာမျိုး ကိုယ်မကျေနပ်တဲ့လူကို ရန်ငြိုးဖွဲ့လက်စားချေဖို့ ကြိုးစားတာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။
သူလည်း တစ်နေ့သေ ၊ ကိုယ်လည်း တစ်နေ့သေမယ့် ကိစ္စ၊ ဘာလို့ ဒေါသထွက်နေဦးမှာလဲ။
တိုတောင်းလှတဲ့ ဘ၀လေးကို စိတ်ပူလောင်မှုတွေနဲ့ ဘာလို့ အချိန်ဖြုန်းပစ်မှာလဲ။
လုပ်သင့်တာမလုပ်ခဲ့မိလေခြင်း၊ မလုပ်သင့်တာ လုပ်ခဲ့မိလေခြင်း လို့နောင်တရ စိတ်ပူပန်နေတာမျိုးလည်းမဖြစ်သင့်ပါဘူး။
ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိဘ၀ကို မကျေနပ်ဘဲ မရေရာမသေချာတဲ့ အနာဂတ်ဘ၀ကိုပုံဖော်တပ်မက်နေတာမျိုးလည်း လုံးဝမဖြစ်စေသင့်ပါဘူး။
ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်လို့ရလာတဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကို ကျေကျေနပ်နပ် လက်ခံပြီး
ပစ္စုပ္ပန်ဘ၀ကို ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ အတိတ်ကံရဲ့  ဖြစ်တည်ရာ
ဘ၀တွေကိုလည်းစိတ်နာ နေလို့ အပိုပါဘဲ။
လူသားတွေရဲ့  မသေခင်ဘ၀ကို အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်စေတဲ့ မနာလို၊
၀န်တိုမှု(ဣုသာ၊ မစ္စရိယ) ကိုလည်းတွန်းလှန်နိုင်ရပါမယ်။
ကိုယ့်ထက်သာမနာလိုတဲ့စိတ်၊ ကိုယ့်လိုပြည့်စုံမှာ ၀န်တိုတဲ့စိတ် လွမ်းမိုးနေတဲ့သူဟာ
မသေခင်က ပုပ်နေတဲ့ သက်ရှိအလောင်းကောင်ပါပဲ။
ကိုယ်အပြုအမူကြမ်းတမ်းသူ၊ နှုတ်ပြောအဆိုကြမ်းတမ်းသူ ၊ စိတ်နေသဘောထား
အကောင်း၊ အဆိုး လောကဓံအမျိုးမျိုးနဲ့ တွေ့ကြုံ လာတဲ့အခါမှာလည်း စိတ်မတက်၊
စိတ်မပျက်ဘဲ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် နဲ့ ခံနိုင်ရည်ရှိရပါမယ်။
နောက်နေ့ဆက်ရေးပါအုံးမည်။ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးလျှင် လွန်စွာကျေးဇူးတင်ပါသည်။
စာကြွင်း။ စာလုံးများကူညီ ပို့ပေးသော သူငယ်ချင်း KL ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by ယူဆဂိ at Monday, May 14, 20072comment
Labels: Life Quality
အမြဲတမ်း ညီးညူတတ်တဲ့ ကျမမှာ သူငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်..
ပြောပြီးတဲ့နေကစပြီး..မပျက်မကွက် ရသလောက် အချိန်လေး ထိုင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
တခါတလေ ထိုင်ဖို့..စဉ်းစား..နေရင်တောင်..ပြောထားပြီးမလုပ်တာမကောင်းဘူးဆိုပြီး ချက်ချင်းဘုရားစင်ရှေ့ရောက်သွားတတ်တယ်။
(စာကြွင်း။ ဒီသူငယ်ချင်းကို ကျမတော်တော်အလေးအနက်ထားပါတယ်..)
သူငယ်ချင်းကိုတော့ဒီအကြောင်းမပြောဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ သူလည်း ဒီမှာ လာဖတ်မှာပါ။
ပြောချင်တဲ့လိုရင်းကိုမရောက်နိုင်ဘူး.. sorry ပါ။ ဆက်ဖတ်ပေးပါ။
တရားထိုင်မယ်ဆိုတော့လည်းဖြစ်သလိုထိုင်လို့မဖြစ်ဘူးလေ...ဒါနဲ့မေးရမြန်းရတာပေါ.။ အဲ့ဒီမှာ..အရှင်ဆန္ဒာဓိက ရဲ့ စာလေးကိုဖတ်မိပါတယ်.။
”သတိထားပြီး ဘယ်လို အသက်ရှူမလဲ”
အသက်ရှူသွင်း၊ ရှူထုတ် လုပ်လိုက်လို့ နှာသီးဝ (သို့မဟုတ်) အထက်နှုတ်ခမ်းဖျား လေထိသွားတဲ့နေရာမှာ စိတ်ကို၊ သတိကို ကပ်ထားပြီး
လေ၀င်ရင် ”၀င်တယ်”၊ လေထွက်ရင် ”ထွက်တယ်” လို့ ရှုမှတ်ပြီး အသက်ရှူရပါမယ်။
လေ၀င်သွားတဲ့အခါ နှာသီးဝကို ထိပြီး ၀င်သွားပါတယ်။ ထိတဲ့နေရာလေးမှာ စိတ်ကို သတိကို ကပ်ထားပြီး ၀င်တယ် လို့ရှုမှတ်ရပါမယ်။
အတွင်းဝင်သွားတဲ့လေကြောင်းနောက် စိတ်မလိုက်ရပါဘူး။ လိုက်ရင် အတွင်းပျံ့ လွင့်မှု ဖြစ်ပါတယ်။
လေထွက်သွားတဲ့အခါ နှာသီးဝကို ထိပြီး ထွက်သွားပါတယ်။ ထိတဲ့နေရာလေးမှာ စိတ်ကို သတိကို ကပ်ထားပြီး ထွက်တယ် လို့ရှုမှတ်ရပါမယ်။
အပြင်ထွက်သွားတဲ့လေကြောင်းနောက် စိတ်မလိုက်ရပါဘူး။ လိုက်ရင် အပြင်ပျံ့ လွင့်မှု ဖြစ်ပါတယ်။
လေ၀င်တဲ့အခါမှာရော၊ လေထွက်တဲ့အခါမှာရော နှာသီးဝ လေထိတဲ့နေရာ တစ်နေရာတည်းမှာဘဲ စိတ်ကို ကပ်ထားရပါမယ်။
ဒါဟာ ရှုမှတ်နည်း အကျဉ်းချုပ်ပါပဲ။ တဲ့....
မှတ်ချက်၊ ။ လူတိုင်းစိတ်မ၀င်စားတဲ့ Topic ဆိုတာသိပါတယ်။ စာဆိုတာဖတ်ထားရင် တနေ့တော့ အသုံးတည့်ကောင်းတည့်မှာပါ။
လူတိုင်းအိုကြမှာပါ။ လူတိုင်းနာကြမှာပါ။ လူတိုင်းသေကြမှာပါ။
ကျမအတွက်ကတော့ တရားထိုင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာ စိတ်ငြိမ်းချမ်းပါတယ်..။
Posted by ယူဆဂိ at Sunday, May 13, 20075comment
Labels: About meditation
*ကျမ သူငယ်ချင်းပြောဖူးတဲ့စကားလေးကို အမှတ်တရတင်ထားတာပါ*
ကြေကွဲမှုကို တ၀က် ဖြစ်စေတတ်သူပါ။
Posted by ယူဆဂိ at Thursday, May 10, 20073comment
Labels: အမှတ်တရ စကားလေးများ
ဒီ ဘလောက်ကိုမတင်ခင်က..ခင်မင်ရပါသော..အဝေးက..သူငယ်ချင်းကို အကူအညီတောင်းမလို့ လှမ်းပြီး connect လုပ်တာ မရခဲ့ပါဘူး..
ဟိုရှာ ဒီရှာ..ဟိုဖတ်ဒီဖတ်နဲ့စမ်းပြီးတင် လိုက်တာ..ဘလောက်တစ်ခုတော့ တက်လာတယ်..
သူများဘလောက်တွေနဲ့ယှဉ်ရင် ဘာပုံမှမပေါက်တဲ့.ကိုယ့်ဘလောက်လေးကို ကြည့်ပြီး နဲနဲတော့ ပီတိဖြစ်နေသလားလို့..
စိတ်ထဲမှာတင်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ရှိတယ်..ခက်တာက ကိုယ်တိုင် အခုထိအဲ့ဒီ source ကိုရှာရဦးမယ်..
Posted by ယူဆဂိ at Thursday, May 10, 20070comment